एनएमबी र ओम डेभलपमेन्ट गाभिने सम्झौता | गृहपृष्ठ
Home शेयर / बैङ्किङ गतिविधि एनएमबी र ओम डेभलपमेन्ट गाभिने सम्झौता
on: May 17, 2019 शेयर / बैङ्किङ गतिविधि
एनएमबी र ओम डेभलपमेन्ट गाभिने सम्झौता
काठमाडौं । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर हुने भएका छन् । यी दुई बैंकले मर्जरका लागि सम्झौतापत्रमा बिहीवार हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनएमबी बैंकका सञ्चालक प्रदीपराज पाण्डे र ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक योगेन्द्रलाल प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंकको ८ महीना यता कुनै पनि शेयर कारोबार भएको छैन । यस अघि प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको यस बैंकको शेयर कारोबार रोक्का भएको थियो । तर, यी दुई बैंकबीच समझदारीपत्र (एमओयू) कार्यान्वयनमा कुरा नमिलेपछि मर्जर प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
कार्यक्रममा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘हामीले नाफाको लागि मात्र नभएर अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ मर्जरपश्चात दुई महीनाभित्र एकीकृत कारोेबार शुरू गर्ने योजना रहेको उनले बताए । एनएमबी बैंकले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भइरहेकोले ओमसँगको मर्जरले टेवा पुग्ने केसी बताउँछन् ।
यी दुई बैंकको मर्जरपश्चात बैंकको नाम एनएमबी बैंक लिमिटेड रहनेछ । बैंकको १ सय ६३ शाखा, १ सय २० एटीएम सञ्चालनमा रहनेछन् । बैंकको चुक्तापूँजी रू. ११ अर्ब ५० करोड, जगेडा कोष रकम रू. ८ अर्ब २८ करोड, निक्षेप रू. १ खर्ब १९ अर्ब र कर्जा १ खर्ब १३ अर्ब पुग्नेछ ।